शीर्ष २ professional व्यावसायिक वर्डप्रेस अनलाइन स्टोर विषयवस्तु २०२१
यी उल्लेखनीय र प्रयोग गर्न सजिलो वर्डप्रेस अनलाइन स्टोर विषयवस्तुहरूको साथ इन्टरनेट संसारको शक्तिमा ट्याप गर्नुहोस् जुन कुनै ईकामर्स वेबसाइटको लागि काम गर्दछ।
उन्नत सुरक्षा प्रोटोकल र संचार मानकहरूको साथ, शक्तिशाली ईन्क्रिप्शन टेक्नोलोजीहरू, अनलाइन शपिंगलाई पहिले भन्दा अझ सुरक्षित बनाउँदछ, र ग्राहकहरूले यस नयाँ वातावरणलाई आरामदायक, सुविधाजनक र विश्वासयोग्यको साथ प्रतिक्रिया गरिरहेका छन्।
सबैले एक अर्ब गर्दैन, तर विश्वव्यापी अर्थतन्त्रले पाईको कहिल्यै ठूलो स्लाइसहरू खसाल्दा। अनलाईन व्यापार र व्यापारिक उत्पादनहरू र सेवाहरूमा, यो अब शो होस्ट गर्न कुनै मतलब छैन।
यदि तपाईंसँग विश्वव्यापी अनलाइन श्रोताको लागि शक्तिशाली, सुन्दर, गतिशील मार्फत तपाईंको उत्पादनहरू मार्केट गर्ने क्षमता र इच्छा छ भने। र आधुनिक पेशेवर खोज, सुरक्षित र भरपर्दो वेबसाइटहरू, र el वाणिज्य समाधानहरू एकीकृत गर्नुहोस्प्रैक्टिकल इलेक्ट्रोनिक्स, अब अरू छैन। निम्न विषयवस्तु संग्रह तपाईंको सबै अनलाइन स्टोर वेबसाइट आवश्यकताहरू पूरा गर्न कम्पाइल गरिएको छ।
जेभेलिन एक अत्याधुनिक वर्डप्रेस ईकामर्स थिम हो। जेभेलिनको WooCommerce ecommerce प्लगइन सुइटको मजबुत निर्मित क्षमताले वेबमास्टरहरूलाई मिनेटमा आकर्षक र कार्यात्मक अनलाइन स्टोरहरू निर्माण गर्न सक्षम गर्दछ। यस विषयवस्तुले तपाईको उत्पादन क्याटलग लेआउटको शैली, एनिमेसन र ट्रान्जिसन अनुकूलन गर्न धेरै सम्भावनाहरू प्रदान गर्दछ।
परिष्कृत भुक्तानी विधिहरू तपाईंलाई रातभरि आफ्नो दैनिक बिक्री अधिकतम बनाउन मद्दत गर्न जेभेलिनमा निर्माण हुन्छन्, जबकि एसईओ सुधार छत को माध्यम बाट यातायात ड्राइव गर्न र अनुवाद तत्परता र RTL अप्टिमाइजेसन सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले प्राप्त गर्नुभयोसम्भव भएसम्मका श्रोताहरू। आज जेभिलिन प्रयोग गरी हेर्नुहोस् र ती बिक्रीहरू सुरू गर्नुहोस्! >
कलियम परिष्कृत र रंगीन WordPress पोर्टफोलियो र बुटिक वेबसाइट विषयवस्तु हो। यो पूर्ण रूपमा उत्तम र पेशेवर विकसित समाधान हो जुन कसैलाई पनि मिनेटमा वेबसाइटहरू द्रुत रूपमा भेला हुन अनुमति दिन्छ। यो विषयवस्तु WPBakery को पृष्ठ बिल्डर प्लगइन, साथै क्रान्ति स्लाइडर र LayerSlider, र मानक WooCommerce ई-वाणिज्य प्लगइन सुइटको साथ पूरा आउट-अफ-बक्स एकीकरणको साथ बन्डल आउँछ। आश्चर्यजनक को भीड, धेरै अनलाइन स्टोर र eCommerce टेम्पलेट्स सहित कार्यात्मक डेमो वेबसाइटहरु र टेम्पलेट पृष्ठ को बन्द। तपाईंको उत्पादनहरू विश्वभरि मार्केटिंग कहिल्यै यत्तिको छिटो र सजिलो भएको छैन। यो किन बढी छथप रूपमा, कम्पनीहरू र व्यक्तिहरूले आफ्नो कलियम संचालित ई-वाणिज्य व्यवसाय सुरू गर्न छनौट गरिरहेका छन्। यसलाई आफैंको लागि प्रयास गर्नुहोस् र तपाईंको स्टोरको मालिक बन्नुहोस्! अधिक जानकारी / डाउनलोड डेमो
TheGem व्यावसायिक र व्यवसाय झुकावको साथ एक बहुउद्देश्यीय WordPress विषयवस्तु हो। यो एकलमा विषय स्थिरता र निजीकरण वितरित गर्न सम्पूर्ण नयाँ तरिका हो। यसको कुनै पनि +70० डेमोलाई द्रुत एक-चरण आयातको साथ प्रयास गर्नुहोस् र तपाईं यसलाई देख्नुहुनेछ! TheGem अविश्वसनीय उत्तरदायी छ र पिक्सेल उत्तम ग्राफिक्स प्रदान गर्दछ। यो पसलहरू र यसको ग्यालरीको साथ उत्पादन दृश्य परिभाषित गर्न को लागी आदर्श हो। यसको WooCommerce र यसको3स्लाइडर विकल्प सँगै मजा लिनुहोस्। पोष्ट र पृष्ठभूमि मिडियाको साथ सजिलै ब्यक्तिगत गर्न सकिन्छ। पृष्ठ ढाँचा एक पृष्ठबाट बहु पृष्ठहरूमा हुन सक्छ।
TheGem सँग बारहरू छन्असीमित पक्षहरू र h पाठकहरू र फुटरहरूको लागि धेरै पूर्वनिर्धारित विकल्पहरू। परिभाषित गर्नका लागि विजेटहरू र यसको क्षेत्रहरू पनि उपलब्ध हुनेछ। TheGem एक सबै मा एक व्यापार अवधारणा हो कि उपयोगकर्ता को आवश्यकता को लागी सहज संग अनुकूलन। बाँकी शंका आफ्नो ग्राहक समर्थन टोली संग समाधान गर्न सकिन्छ! एक पटक हेर्नुहोस् र आफैलाई विश्वस्त गर्नुहोस्! TheGim हेर्नुहोस् >
यदि यो हो भने, समय र ऊर्जा बचत गर्नुहोस् वेबफिल्डको साथ। यो वर्डप्रेस अनलाइन स्टोर विषयवस्तु एक उत्तम समाधान हो जुन तपाईंलाई उठाउनेछ र चाँडै चल्नेछ। उपकरणले तपाईंलाई कुनै पनि कोडिंग र डिजाईन ज्ञानको लागि कहिले पनि सोध्दैन। सुविधाजनक ड्र्याग र ड्रप पृष्ठ बिल्डरको साथ, जो कोहीले आफ्नो रचनात्मक दिमाग निकाल्न र डिजाइन गर्न र एक शीर्ष निशान अनलाइन स्टोर स्थापना गर्न सक्दछ। यद्यपि Webify फेसन परियोजनाहरु को लागी आदर्श हो,यहाँ र त्यहाँ केही ट्वीकको साथ प्रयोग गर्न तयार छ, तपाईं केही फरक तरिकाले बेच्न उपकरणको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
मुख्य डेमो सामग्रीका अतिरिक्त, तपाईंले अन्य लेआउटहरू, पूर्वनिर्धारित हेडरहरू र फुटरहरू फेला पार्नुहुनेछ, दुई भन्दा बढि सय सर्टकडहरू र असीमित साइडबारहरू। एक स्थिर स्थिर र निर्दोष किनमेल अनुभव को लागी, Webify ले तपाइँको वेबसाइट को लागी पूर्ण उत्तरदायित्व र ब्राउजर अनुकूलता को ग्यारेन्टी गर्दछ।
अधिक जानकारी / डाउनलोड डेमो मर्चेन्डिजर
मर्चेंडाइजर एक WooCommerce विषयवस्तु हो। यो मानक WooCommerce eCommerce प्लगइन सुइटको वरिपरि डिजाईन गरीएको छ।
मर्चेंडाइजिंग उद्देश्यपूर्ण रूपमा WPBakery पृष्ठहरूका जेनेरेटर मार्फत धेरै अनुकूलन विकल्पको साथ उत्पादहरूको धेरै ठूलो सूचीको बजार गर्न सजिलो बनाउनको लागि डिजाइन गरिएको हो। अनुकूलक एभन विषयवस्तु विकल्पहरूceas। अब मर्चेन्डाइजर प्रयोग गरी हेर्नुहोस् र वास्तविक सम्झौता के हो हेर्नुहोस्!
ड्र्याग एण्ड ड्रप पेज बिल्डर, शीर्ष प्रीमियम क्रान्ति स्लाइडर र लेयर स्लाइडर प्लगइनहरू, र ईकामर्स कार्यक्षमता WooCommerce सँग एकीकृत। यो विषयवस्तु सबै प्रकारको भौतिक स्टोरहरूको लागि एक अनलाइन आधार सिर्जना गर्नका लागि एक आदर्श उम्मेद्वार हो; रेकर्ड स्टोरहरूदेखि बुक स्टोरहरू र कपडा पसलहरू, अनकोडले ती सबै ह्यान्डल गर्न सक्दछ र तिनीहरूलाई तिनीहरूको उत्तम देखिने बनाउन सक्छ। आज अनकोड प्रयोग गरी हेर्नुहोस् र वेब स्टोर कन्फिगर गर्न कति सजिलो छ भन्नेमा चकित हुनुहोस्! अधिक जानकारी / डाउनलोड
दुकानदार एक सुन्दर पेशेवर उत्तरदायी वर्डप्रेस वर्डप्रेस बहुउद्देशीय विषयवस्तु हो।
ई-वाणिज्य क्षमताहरू तपाईको सुविधाको लागि पूर्ण रूपमा शपकीपरमा निर्मित छन्, त्यसैले तपाईं सजीलै डेलिभरेवलहरू वा डाउनलोड गर्न योग्य उत्पादनहरू बेच्न सक्नुहुन्छ, स payments्कलन र भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, उत्पादन सूची प्रबन्ध गर्नुहोस्। यसको भर्खरको प्रदर्शन अप्टिमाइजेसनलाई धन्यबाद, यो अब बजारमा सब भन्दा छिटो WooCommerce विषयवस्तु मध्ये एक हो। थप जानकारी / डाउनलोड डेमो
वेबसाइटहरू परिष्कृत प्रदर्शनभण्डारको दायरा स्थापना को दिन स्टोर खोल्न अनुमति दिनुहोस्। एक सहज र उन्नत दृश्य पृष्ठ बिल्डरको साथ मिनेटमा तिनीहरूलाई अनुकूलित गर्नुहोस्। अनुकूलन विकल्पहरूको टनले तपाईंलाई तपाईंको हलेना वेबसाइटहरू निजीकृत गर्न अनुमति दिन्छ। तपाईंको स्टोर ब्रान्डसँग मेल खान्नुहोस् र तपाईंको अन्त प्रयोगकर्ता ब्राउजि experience अनुभवको प्रत्येक पक्षलाई समन्वय गर्नुहोस्। हलेनाले तपाईंलाई उपकरणहरू दिन्छ जुन तपाईंले ठुलो केटाहरूसँग खेल्न आवश्यक छ। Halena को साथ, संसारभर मा तपाईका सामानहरू बजार गर्नुहोस्! >
यदि तपाईं ईकामर्स वेबसाइट खोज्दै हुनुहुन्छ भने, यो अनलाइन स्टोरको थिम हो यो वर्डप्रेस ह्यान्जर तिम्रो लागि गर बन्डलमा, विषयवस्तुमा धेरै विकल्पहरू छन् तपाईलाई एक प्रोफेशनल अनलाइन स्टोर सुरु गर्न चाँडो साना काम के निवेशको साथ सकेसम्म चाँडो। तपाईं जस्तोचाँडै फेला पार्नेछ, ह्याger्गरसँग पनि एक टन-बाहिर-बाकस सामग्री छ जुन तपाईं स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। केवल राम्रो बुझाइको लागि प्रत्यक्ष डेमोहरू जाँच गर्नुहोस्। जे होस्, तपाईले ह्या Han्गरको प्रत्येक सेक्सन ट्वीक गर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई तपाइँको ब्रान्डलाई टीमा लिन लगाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ नयाँ हुनुहुन्छ भने, तपाइँ आधारबाट एक अनलाइन स्टोरबाट सुरू गर्न सक्नुहुनेछ। र तदनुसार विकसित, ह्यान्जरले सजिलोसँग सबै ह्यान्डल गर्दछ। यसको फोकल पोइन्ट बाहेक जो ई-वाणिज्य हो, ह्या Han्गरले सफा ब्लग पनि समावेश गर्दछ। सेक्सन यति अचम्मको छ कि तपाईं यसलाई खाली छोड्न र यसको सट्टा सामग्री मार्केटिंगको लागि प्रयोग गर्न चाहनुहुन्न। थप जानकारी / डाउनलोड
, एक उपकरण हो जुन तत्काल तपाईंको चासो जगाउँदछ। लचिलोपन र अनुकूलन क्षमताको साथ, होo्गो धेरै, धेरै रोजगारहरूको पूरा हुने सुनिश्चित गर्दछ।बिभिन्न अनलाइन टिकटहरू। चाहे तपाईं कपडा, सामान, झोला, वाच, ग्याजेटहरू, छालाका सामानहरू आदि बेच्न चाहानुहुन्छ, हो Hong्गोको साथ अब अनलाइन स्टोर सिर्जना गर्नुहोस्। लगभग तत्काल निर्माणको लागि तपाईंको डिस्पोजलमा धेरै प्रयोग-गर्न-उपयोग उपकरणहरू छन्। वास्तवमा, यदि तपाईले अफ-अफ-द-बक्समा अडिग रहनु भयो भने, होo्गोले केही क्लिकहरूको साथ पूर्ण कार्यात्मक वेबसाइटको ग्यारेन्टी दिन्छ। यसको अतिरिक्त, तपाईले शक्तिशाली र प्रयोगकर्ताको प्रयोग गरेर पूर्वनिर्धारित लुक स्टाईल र समायोजन गर्न सक्नुहुनेछ। मैत्री WPBakery पृष्ठ बिल्डर। कुनै पनि अन्य सम्भव ई-वाणिज्य तत्व र घटक पनि सम्झौताको एक हिस्सा हो। उत्पाद ईच्छा सूची र द्रुत दृश्यबाट निफ्टी फिल्टरिंग प्रणाली, रंग रस्चेसहरू, अन्तर्क्रियात्मक ब्यानरहरू र क्याटलग मोडमा, होo्गोले केहि पनि प्रदान गर्दछ र तपाईंले कल्पना गर्न सक्ने सबै थोक।
अधिक 'इन्फोस / डाउनलोड
CiyaShop एक स्वच्छ र निफ्टी WordPress अनलाइन स्टोर विषयवस्तु हो जुन तपाईंलाई लगभग कुनै पनि प्रकारको अनलाइन स्टोर सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। ई-वाणिज्य प्लेटफार्महरू निर्माण गर्न यस बहुमुखी उपकरणसँग कुनै सीमितताहरू छैन। वास्तवमा तपाईले सामना गर्नुपर्ने एक मात्र सीमितता तपाईको आफ्नै कल्पनाशक्ति हो।
प्रवाहको साथ जानुहोस्, बक्स बाहिर सोच्नुहोस् र सम्भावनाहरूको नयाँ क्षितिज तपाईको अगाडि खुल्नेछ, CiyaShop को लागी धन्यवाद। जे होस्, यदि तपाईंलाई केही प्रेरणा चाहिन्छ भने, चालीस शामिल प्रजातिहरू हेर्नुहोस् र यो सम्मोहक साइट टेम्प्लेटबाट के सम्भव छ हेर्नुहोस्। CiaShop किटमा, त्यहाँ एक टन सामग्री छ।आपकी सुविधाको लागि प्रिसेट। तर पहिले, अद्भुत एक-क्लिक स्थापना प्रयोग गर्नुहोस् र आँखाको पलकमा तपाईंको डेमो शुरू गर्नुहोस्। CiyaShop मा कूल १ 160० भन्दा बढी पूर्व-निर्मित लेआउट र सेक्सन, प्रत्यक्ष अनुकूलन र धेरै प्रीमियम प्लगइनहरू छन्कुनै अतिरिक्त लागत। आज CiyaShop को साथ अनलाइन बेच्न शुरू गर्नुहोस्!
अधिक जानकारी / डाउनलोड डेमो MyMedi
आफ्नो फार्मेसी वा अनलाइन मेडिकल स्टोर निर्माण MyMedi संग एक तस्वीर हो। भारी लिफ्टि yourself आफै गर्न आवश्यक छैन जब तपाइँ MyMedi लाई सट्टामा यसको ख्याल राख्न दिन सक्नुहुन्छ। यो दिमागमा संग, तपाईं केवल समाप्त मा ध्यान केन्द्रित, MyMedi लाई तपाइँको ब्रान्डि regulations नियमहरु लाई अनुकूलन। यसबाहेक, तपाईं यसलाई सम्पादन गर्न सक्नुहुनेछ र कस्टम पृष्ठहरू पनि सिर्जना गर्नुहोस्। सकी एनजी उत्पादहरूका साथ तपाईं सामग्री बजारका साथ ब्लग गर्न र तपाईंको बृद्धि गर्न सक्नुहुनेछ।
थप जानकारी / डाउनलोड डेमो एरोa
Aora वर्डप्रेस मा एक स्टोर विषयवस्तु हो। घर र जीवनशैली सम्बन्धित सबै कुराको लागि लाइन। एक सुन्दर र प्रभावशाली ईकॉमर्स वेबसाइट सिर्जना गर्नुहोस् जुन तपाईं अन्तिम बनाउन थोरै समय लिने छ। धेरै पूर्व-डिजाइन लेआउटहरू र ड्र्याग-एण्ड-ड्रप टेक्नीकको साथ, तपाईंलाई शैलीको रूपमा तपाईंको अनलाइन व्यापार सुरू गर्न कुनै अनुभवको आवश्यक पर्दैन।
प्लस, अरोरा तपाईंको अनलाइन स्टोरको सबै पक्षहरूको तरिकाहरूको हेरचाह गर्दछ। , सबै समयमा एक शक्तिशाली प्रदर्शन सुनिश्चित। कार्टमा थप्नुहोस्, प्रत्यक्ष खोज, फ्ल्यास बिक्री, स्लाइडर क्रान्ति, र एक-क्लिक स्थापना स्थापना गर्न लायकका केही राम्रा सुविधाहरू छन्। निing अझै, त्यहाँ अझ धेरै तपाईं अओरा किटको साथ पाउनुहुन्छ।
आभूषण निर्माण, व्यवस्थापनको समयमा तपाईंको सबै भन्दा राम्रो साथी हुनेछ।र एक अनलाइन गहना स्टोर को रखरखाव। यसको न्यूनतम र ग्लैमरस डिजाइनको साथ, तपाईं सजिलै सबैको ध्यान आकर्षण गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ छनौट गर्न विभिन्न सूचकांक र आन्तरिक पृष्ठहरू छन्, ती सबै पूर्ण सम्पादन योग्य छन्। यसको साथ, तपाईं गहनाको तपाईंको संस्करण सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ र शैलीमा अनलाइन सुरू गर्न सक्नुहुनेछ। एक शुरुआतको रूपमा, तपाई धेरै भिडियो ट्यूटोरियलहरू पनि आनन्द लिन सक्नुहुन्छ जुन तपाईलाई पूर्ण रूपमा संलग्न हुनुभन्दा पहिले आधारभूत कुराहरू बुझ्न मद्दत गर्दछ।
गहनाका अन्य विशेषताहरू स्क्रोल बटन, मेनू ओभरले, स्क्रोलि anima एनिमेशनहरू र एक अनलाइन जर्नल मोड्युल हुन्। दिमागमा राख्नुहोस्, बिजुक्सले गहनाका ब्रान्डहरूका लागि चमत्कारहरू पनि गर्दछ।
थप जानकारी / डाउनलोड डेमो ओर्सन
ओर्सन एक विश्वसनीय, संसाधन र उत्तरदायी WordPress अनलाइन स्टोर वेबसाइट थिम हो। यो वेबमास्टरहरूको लागि व्यवसाय सेट अप गर्न खोजको लागि एक अभिनव उपकरण हो।अनलाइनमा प्रभावकारी रूपमा टिक गर्नुहोस्। शक्तिशाली बिल्ट-इन डब्ल्यूपी बेकरी पृष्ठ बिल्डरको साथ, वेबसाइट डिजाइन कार्यहरू एक स्न्याप हो। Orson व्यावसायिक अनुप्रयोगहरूको दायराको लागि उत्तम छ। तपाईले प्रत्येक केसलाई २ 23 फरक होमपेजले कभर गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। ताजा-सामना गर्मी फेशन स्टोर वा युवा टेक रिटेल स्टोर। सहायक उपकरणहरू र गहना
, खेलकुदका सामानहरू वा मोबाइल फोनहरू, ओर्सन तपाईका लागि त्यहाँ छ।
केही क्लिकमा पारदर्शी
स्टोरहरू वा सरल मल्टि-पृष्ठ पसलहरू
सिर्जना गर्नुहोस्। सेकेन्डमा डेमोहरू आयात गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई सहजै अनुकूलित गर्नुहोस्। तपाईंको अघिल्लो कोडिंग अनुभवले कुनै फरक पार्दैन जब यो महान सुविधाहरू प्राप्त गर्ने आउँदछ। ओर्सन स्टोरहरू राम्रा देखिन्छन् र आकर्षणको रूपमा काम गर्छन्। धेरै उत्कृष्ट हेडर शैलीहरू र निफ्टी वालेट सर्टकडहरू तपाईंको लागि उपलब्ध छन्। क्रान्तिकारी स्लाइडर अलराम्रो carousels र आकर्षक स्लाइडशो अनुकरण गर्नुहोस्। तपाइँ तपाइँका दर्शकहरूलाई व्यस्त राख्न सक्नुहुनेछ उनीहरूले तपाइँको उत्पादन सूचीलाई ब्राउज गर्दा। एसईओ अप्टिमाइजेसनले ओर्सनलाई खोज इञ्जिन रैंकिंगमा एक ठोस खेलाडी बनाउँदछ। यो बाटो, तपाईं आफ्नो ट्राफिक, बिक्री र रातारात आय वृद्धि। WooCommerce प्लगइनले भुक्तान गेटवेदेखि शपिंग कार्टहरूमा Orson का प्रभावशाली व्यापार क्षमताहरू। Orson को साथ, आज बिक्री बनाउनुहोस्!
अटेलर एक दृश्य परिष्कृत ई-वाणिज्य विषयवस्तु हो। यस विषयवस्तुमा १२ भन्दा बढी पूर्ण भिन्न प्रदर्शन वेबसाइटहरू सामेल छन्। दर्जनौं हेडरहरू, फुटरहरू, आश्चर्यजनक दृश्य प्रभावहरू, शक्तिशाली लंबन भिजुअल विकल्पहरू र एजेए फ्रन्ट-एन्ड शपिंग कार्टहरूको साथ तेजस्वी अनुकूलन योग्य उत्पाद स्लाइडरहरू।एक्स एनिमेसन को बिभिन्न शैलीहरू समावेश गरीरहेको छ ... Ateiler को कुनै अन्त छैन वास्तवमा अनलाइन स्टोर सिर्जनाको साँचो शक्ति प्रदर्शन गर्नुहोस्। नेटिभ एसईओ र पूर्ण प्रतिक्रियाशीलता एटेलरमा सम्झौता मोहर गर्दछ, बजारको सब भन्दा शक्तिशाली बहु-अवधारणा ई-वाणिज्य विषयवस्तु। टेलर
श्रीमती टेलर दर्जी एक ट्रेंडी विषयवस्तु हो जुन यसको पूर्ण स्क्रिन स्लाइडरको साथ बाहिर खडा हुन्छ। यो खुद्रा व्यापार मालिकहरू र कपडा ब्रान्डहरूका लागि उपयुक्त छ जुन उनीहरूको उत्पादन अनलाइन बेच्न चाहन्छ। यदि तपाईं अनलाईन स्टोर सिर्जना गर्न चाहनुहुन्न भने, तपाईं अझै यो विषयवस्तु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ तपाईंको व्यापारलाई प्रमोट गर्न वा तपाईंको उत्पादनहरू र सुविधाहरू प्रदर्शन गर्न विश्वलाई यसको ई-वाणिज्य सुविधा अक्षम गरेर विषयवस्तु प्यानलबाट।
मि। । दर्जी WordPress विषयवस्तु तपाईंको लागि उल्लेखनीय विषय अनुकूलन विकल्प प्रदान गर्दछ।तिनीहरू असीमित र options विकल्पहरू, लम्बाई छवि समर्थन, कस्टम लोगो अपलोड, आँखा-कैचिंग स्टिकी हेडर, बिल्ट-इन स्लाइडर, र वैकल्पिक ईच्छा सूची कार्यक्षमता हुन्। थिमको बिल्ट-इन डब्ल्यूपी बेकरी पृष्ठ बिल्डरले तपाईंको असीमित पृष्ठ लेआउट डिजाइन ड्र्याग र ड्रप ईन्टरफेस प्रयोग गरेर सिर्जना गर्न सजिलो बनाउँदछ। थप, श्री दर्जी WooCommerce तयार छ तपाइँलाई सजिलैसँग भौतिक, डिजिटल, वा सम्बद्ध उत्पादनहरू बेच्न मद्दत गर्न। यस विषयवस्तुसँग शक्तिशाली स्टोर व्यवस्थापन, बिल्ट-इन अर्डर ट्र्याकिंग प्रणाली, कर र शिपिंग विकल्पहरू, असीमित कोटीहरू र उपश्रेणीहरू, इन-इन कुपन प्रणाली, भुक्तान पृष्ठ र सजिलो शिपिंग क्यालकुलेटर पनि छ।
श्री टेलरले ग्राहकलाई तपाईंको उत्पादनहरू मूल्या rate्कन वा मूल्या rate्कन गर्न मद्दत गर्दछ, तपाईंलाई स्टोर स्टोर रिपोर्ट विश्लेषण गर्न मद्दत गर्दछ, र वैकल्पिक ईच्छा सूची सुविधा। अधिक जानकारी / डाउनलोड डेमो भ्पस
Vapas एक nic अनलाइन भ्याप स्टोरहरूको लागि WordPress वेब स्टोर थिम हो। वाफिंगको लोकप्रियताको साथ, त्यहाँ एक राम्रो मौका छ कि तपाईं उद्योगमा पनि प्रवेश गर्न चाहानुहुन्छ। शक्तिशाली र प्रयोग-गर्न-सजिलो Vapas प्रयोग गरेर, तपाईं अब चाँडै एक अनलाइन उपस्थिति निर्माण गर्न सक्नुहुनेछ। टेक-प्रेमी हुनु आवश्यक छैन, तपाईं प्रो जस्तो ईन्टरनेटमा vaping उत्पादनहरू प्रस्ताव गर्न सक्नुहुनेछ। पूर्व डिजाइन गरिएको लेआउटहरू र WPBakery पृष्ठ बिल्डरको संयोजनको साथ, जो कोहीले छिटो नै प्रथम श्रेणीको अन्तको उत्पादन शिल्प गर्न सक्दछ।
ब्लग र अन्य धेरै साना आन्तरिक पृष्ठहरू पनि किटमा छन्। त्यसो भए तपाईं मिश्रण र मिलाउन सक्नुहुनेछ। । यसका साथै तपाईले धेरै विजेटहरू, स्लाइडर क्रान्ति, अजाक्स खोज, मेगा मेनू
, निफ्टी एनिमेसन, र एउटा भीड मेनू पाउनुहुन्छ।राम्रो टापु पनि। सानो लगानीको लागि अब तपाई एउटा अनलाइन व्यापार सुरू गर्न सक्नुहुनेछ र भाप्सको साथ तत्काल भिन्नता गर्न सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारी / डाउनलोड डेमो मिल्डहिल
जैविक र खाद्य स्टोरहरूको लागि मिल्डहिल सही एउटा वर्डप्रेस अनलाइन स्टोर हो। विषयवस्तु पूर्ण अनलाइन उपस्थिति नियमित गर्न। तपाइँ नौवटा मध्ये एकको साथ कामहरू गर्न सक्नुहुनेछ, बिभिन्न रचनात्मक र धेरै प्रभावकारी डेमो। दिमागमा राख्नुहोस् कि मिल्डहिलका सबै लेआउटहरू १००% अनुकूलनयोग्य छन् कुनै कोडको एकल लाइन छुनु र सम्पादन गर्नुपर्दैन। डब्ल्यूपी बेकरी पृष्ठ बिल्डरको एकीकरणले असीमित संभावनाहरू खोल्दछ जुन तपाईंको कौशल स्तरले फरक पर्दैन।
मिल्डहिल सुविधाहरू र प्रकार्यहरूको भरपर्दो सेटको साथ आउँदछ जुन तपाईंलाई भीडबाट बाहिर खडा हुन मद्दत गर्दछ। तत्वहरूको टन, आन्तरिक पृष्ठहरू, ब्लग लेआउटहरू, सर्टकडहरू, र हेडर शैलीहरू।हेल्ड सबै परिभाषित छन् र मिल्डहिलबाट अधिक प्राप्त गर्नका लागि तपाईं तयार हुनुहुन्छ। एक क्लाइम सीके डेमो डाटा आयातकर्तालाई सक्रिय बनाएर सामेल हुनुहोस् र सहि ट्र्याकमा सँधै सुधार मिल्डहिलको साथ सुरू गर्नुहोस्।
विशेष हो ई-वाणिज्य मा। यसको सहज र एक क्लिक डेमो आयातको साथ कन्फिगर गर्न यो सजीलो छ। यो विशेष प्रस्तावहरूको साथ फेला पार्नुहोस् र धेरै शीर्ष गुणवत्ता प्लगइनहरूसँग उपयुक्त छ। आर्टेमिससँग मेनू र असीमित रंगका लागि बहु विकल्पहरूको साथ एक उत्तरदायी लेआउट छ। यो एक गतिशील स्टोर साइडबार, ब्लग पृष्ठ, र अनुकूलन पृष्ठभूमि शामिल छ। तपाईले एक निजीकृत सेक्सन ओगो र फेभिकन्स पनि पाउनुहुनेछ। आर्टेमिसले शान्त अनलाइन स्टोरहरू सेट अप गर्न WooCommerce एकीकरण प्रदान गर्दछ। उहाँसँग छत्यहाँ एक minicart, इच्छा सूची र एक सम्पर्क पृष्ठ परिभाषित गर्न को लागी छ। उत्पादनहरू देखाउन ग्यालरीका विभिन्न शैलीहरू प्रयोग गर्नुहोस्। स्लाइडर क्रान्ति एकीकरण छविलाई सबै भन्दा राम्रो प्रदर्शन गुण प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ! आर्टेमिस दुबै पो साथ अनुवादको लागि तयार छ। फाइल र दृश्य प्रदर्शन थपको साथ पूर्ण प्याक। यो तपाइँलाई एक lookbook, उत्पादन को एक द्रुत दृश्य र मेनू टोकरी को सारांश दिन्छ। सिर्जनाकर्ताहरूले आर्टेमिसलाई सबैको उत्तम व्यापार सेवा प्रदायकको रूपमा डिजाइन गरे। उनको नाम जस्तै, देवीको। यो १००% छ र स्क्रीन, ढाँचा र ब्राउजरहरूमा अनुकूलन। यसको सर्वश्रेष्ठमा बहुमुखी प्रतिभा! यो नि: शुल्क अपडेट र उत्कृष्ट कागजातको साथ आउँदछ! आर्टेमिसलाई राम्रोसँग हेर्नुहोस् र तपाई निश्चित हुनुहुन्छ कि उनले तपाईंलाई आफ्नो पागल सम्भावनाको साथ विश्वस्त तुल्याउनेछन्! आर्टेमिस प्रयोग गर्नुहोस्! >
जेएक एक बहुउद्देश्यीय, भरपर्दो र बहुमुखी WordPress ई-वाणिज्य वेबसाइट विषयवस्तु हो। आधुनिक र अद्वितीय वेबसाइटहरू निर्माणको लागि उपकरणहरूको निर्बाध सेट। एकीकृत प्रीमियम प्लगइनहरू, डेमो वेबसाइटहरू, र पृष्ठ टेम्पलेट्स तपाईंको काम स्ट्रिमलाइन गर्न। प्रत्यक्ष सम्पादन र दृश्य अनुकूलनले तपाईंलाई कोडको रेखा नलगाई प्रो जस्तो डिजाईन गर्न दिन्छ। सबै प्रकारका अनलाइन स्टोरहरूले जुनसँग काम गर्न मन पराउँछन्। अद्भुत पोर्टफोलियो पृष्ठहरू र अद्वितीय उत्पाद पृष्ठहरूले शैलीमा तपाईंको उत्पादनहरू प्रदर्शन गर्दछ। आश्चर्यजनक आईलाइटबक्स र एप्पल लाइभ फोटो दृश्य प्रभावहरूले तपाईंको सामग्रीलाई अलग बनाउँछ। एकीकृत WooCommerce फ्रेमवर्क तपाईं पसिना बिना आफ्नो उत्पादनहरु को बजार गर्न को लागी अनुमति दिन्छ। अद्भुत स्टोर ग्रिडहरू, सूचीहरू र अनुकूलन फिल्टरहरूले तपाईंको स्टोर २१ औं शताब्दीमा ल्याउँदछशताब्दी। उत्तरदायी र क्रस अनुकूल, जून तपाइँको दर्शकहरु लाई रातै विस्तार। आज जुन पाउनुहोस् र तपाईंको व्यापार बढ्दै हेर्नुहोस्! >
शहरको सबैभन्दा लचिलो WooCommerce स्टोरको साथ तपाईंको बिक्री बढाऊ। पेश गर्दै शपरीफिक, एक वर्डप्रेस अनलाइन स्टोर विषयवस्तु जुन उल्लेखनीय सर्वोच्च बहुमुखी प्रतिभा हो, कुनै पनि प्रकारको व्यवसाय वा कोठा सम्हाल्दै। ईकॉमर्समा ध्यान केन्द्रित गर्दै, यो साइट टेम्पलेटले तपाईंलाई अद्भुत उत्पादनहरू प्रदर्शन गर्न, भुक्तान विकल्पहरूको साथ काम गर्न, र तपाईंको ग्राहकहरूको लागि ईच्छा सूचीहरू थप्न अनुमति दिन्छ। तपाईंको व्यापारको बारेमा विस्तृत जानकारी थप्नुहोस्। यसका साथै तपाई सामग्री बजारका लागि ब्लग प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र अझ बढी व्यापार उत्पन्न गर्न सक्नुहुनेछ।
थप रूपमा, सबै टेम्प्लेटहरू पूर्ण रूपले लचिलो र अनुकूलन योग्य छन् र सबै तत्वहरू सेक्सनहरूमा छन्, त्यसैलेui यसलाई धेरै व्यवस्थित र प्रयोग गर्न सजिलो बनाउँदछ। बिभिन्न तत्वहरूले अनुकूलन मेनू, काउन्टर, प्रगति पट्टी, मूल्य सूची, उत्पादन तुलना, र Google नक्सा समावेश गर्दछ। थप रूपमा, तपाईं केवल केहि क्लिकहरूमा विशेषज्ञ उद्यमी हुन सक्नुहुन्छ प्रयोग गर्नका लागि तयार तत्त्वहरूलाई धन्यवाद जसले शॉपरिफले तपाईंको डिस्पोजलमा राख्दछ। थप जानकारी / डाउनलोड
Handy पनि उद्देश्यपूर्ण रूपमा उपकरणहरूको एक परिष्कृत सेट, प्लग प्रदान गरिएको छ। -इन, सुविधाहरू र टेम्पलेट्स एक सहज वातावरणमा एकीकृत। र एक शक्तिशाली ब्याक-एंड प्रयोगकर्ता ईन्टरफेस जसले सबैलाई आफ्नै स्टोर सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छमिनेटमा s व्यावसायिक गुणवत्ता अनलाइन। सबै मा, Handy कारीगरहरु, कलाकारहरु र सबै प्रकारका रचनात्मक व्यवसायहरु को लागी परम अनलाइन स्टोर थीम हो जसले आफ्नो अनलाइन व्यवसाय को लागी एक ठोस आधार निर्माण गर्नु पर्छ।
अधिक जानकारी / डाउनलोड
Aurum एक दृश्यात्मक यादगार र साहसी अभिव्यक्त WordPress WordPress अनलाइन स्टोर थिम हो। एक विशेष विषयवस्तु सबै प्रकारको अनलाइन स्टोरहरूको लागि एक प्रभावी र प्रभावी वेबसाइट समाधानको रूपमा सिर्जना गरिएको हो। विकासकर्ताहरूले यसलाई उपयोगी लेआउटहरू, टेम्प्लेटहरू, विजेटहरू, उपकरणहरू, र आधुनिक अनलाइन स्टोर वेबसाइट निर्माण गर्नका लागि सर्टकडहरूको साथ प्याक गरेका छन्। तर Aurum को वास्तविक शक्ति यसको आश्चर्यजनक सौंदर्य डिजाइन दर्शन मा निहित छ। यो विषयवस्तु एक तपस्या नभएसम्म रंगीन minismism हो जुन Aurum का धेरै टेम्प्लेट पृष्ठहरू र वेबसाइटहरूमा स्पष्ट छ। अउरम अनलाइन स्टोरहरूको लागि आदर्श हो जुन विशेष शैलीको सचेत बजार क्षेत्रहरू सम्बोधन गर्दछ, जसमा फेशन स्टोर , गहना स्टोरहरू, बुकस्टोरहरू,
र अन्य। अनलाइन स्टोरहरूलाई शक्तिशाली आवश्यक पर्दछ। e- वाणिज्य कार्यक्षमता। यो विषयवस्तु वेबसाइटहरूको लागि पनि उत्तम हो किनकि तपाईले इच्छा गरेको कुनै ब्रान्ड पहिचानको साथ यसलाई ट्याग गर्न सक्नुहुन्छ। थप रूपमा, यो यसको सफा र शीत अनुकूलतामा गहिरो सुन्दर छ। थप रूपमा, Aurum परिष्कृत उपकरणहरू जस्तै पारदर्शी हेडरहरू, सुन्दर स्वागत पृष्ठहरू, अनुकूलन WPBakery पृष्ठ निर्माणकर्ता सर्टकडहरू, र अतिरिक्त कार्यक्षमताको लागि सुविधाहरू प्रयोग गर्दछ। संक्षेप मा, Aurum प्रमाण हो कि कहिलेकाँही चम्किला चीजहरु वास्तवमै सुनौलो हुन सक्छ। >
नान्ट्स एक होधेरै भावपूर्ण र नेत्रहीन प्रलोभन WordPress मेरो प्रतिक्रिया बहु बहुउद्देश्य ईकामर्स। तपाईं बीचमा काल्पनिक अनुप्रयोगहरूको अधिकता प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, किनकि नान्टेसले तीनवटा चीजलाई अनुकूलित गर्दछ। सर्वप्रथम, यससँग सजिलै बजार र सेवाहरू बजार गर्न, तिनीहरूको सूची बनाउन र जनतामा प्रस्ताव गर्न सक्ने क्षमता छ। अर्को, जटिल वेबसाइट अनुप्रयोगहरूको लागि अविश्वसनीय रूपमा विश्वसनीय AJAX संरचनात्मक कंकाल उत्पादन गर्न वेबमास्टरहरूलाई सक्षम गर्ने क्षमता। नान्ट्सले तीनै बिन्दुमा पार्क बाहिर आउट गर्दछ। यो कर्पोरेट, ई-वाणिज्य र सामान्य अनलाइन स्टोर वेबसाइटहरूको उन्नत रेटिंगको शक्तिशाली प्रणालीको साथ अपेक्षाहरू मिल्छ र बढाउँदछ। यस विषयवस्तुसँग यसको अनुपम ड्र्याग र ड्रप पृष्ठ बिल्डर र WooCommerce को लागि पूर्ण एकीकृत समर्थन छ। अन्तमा, Nantes एक शानदार मोबाइल मेनू, स्लाइडिंग र स्पर्श, एक टोकरी, एक AJAX टोकरी, एक खोज छउत्पादनहरू र फिल्टरहरूको ई। अन्तमा, नान्टेस एक विषयवस्तु हो जुन यति धेरै गरिएको छ, यसले बाँकीलाई नराम्रो देखिन्छ। थप जानकारी / डाउनलोड
उत्तर उत्तर सुन्दर छ < यो थिम प्रोफेशियल हेराई, पॉलिश, स्मार्ट र छिटो लोडि is पनि छ। उत्तर विशेष को लागी अनुप्रयोग को लागी आदर्श हो जस्तै उच्च फैशन अनलाइन स्टोर, कार्यशाला अनलाइन स्टोर। यो डिजाइन स्टुडियो अनलाइन स्टोरहरू, पेशेवर रचनात्मक अनलाइन स्टोरहरू, कलाकार वा कला ग्यालरी अनलाइन स्टोरहरू र अन्य समान व्यवसायहरूको लागि पनि उत्तम छ।
यसको अतिरिक्त, उत्तरले वेबमास्टर्सलाई अविश्वसनीय सरल र सहज अनुभव दिन्छ। तपाईले विस्फोटक, उच्च प्रभाव र आश्चर्यजनक वेब पृष्ठहरू पनि उत्पादन गर्न सक्दछ मिनेटमा कोडि no ज्ञानको आवश्यक छैन।। अन्त प्रयोगकर्ताहरूले यसलाई प्रयोग गर्न सक्दछन्। तपाईं यसको सहज रूपमा डिजाइन ब्राउजि experience अनुभव यसको पदानुक्रम मेनू, अत्यधिक अनुकूलन साइडबार, र सुन्दर उत्पाद carousels प्रयोग गरी आनन्द लिन सक्नुहुन्छ। यस विषयवस्तुमा बंगारा-ड्रपिंग उत्पाद पोर्टफोलियोहरू, स्थिर लंबन पृष्ठहरू, नेटिभ WooCommerce एकीकरण, र विस्तृत खोज इञ्जिन अनुकूलन पनि समावेश गर्दछ। समग्रमा, उत्तर एक विषयवस्तु हो जुन जान्दछ कि यो कहाँ जाँदै छ।
थप जानकारी / डाउनलोड
बहु मीऑक्सीजनको पृष्ठ लेआउटहरू र पृष्ठ टेम्प्लेटहरू, जुन तपाईं सजीलै स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ, सबै साधारण प्रयोगकर्ता नेभिगेशन अनुभवमा फोकस गर्छन्। यसबाहेक, यस विषयवस्तुले तपाइँको वेबसाइटमा तपाइँलाई मार्गदर्शन गर्दछ जब तपाइँ एकै समयमा घरमा महसुस गर्नुहुन्छ। यो तपाइँको ग्राहकहरु लाई आफ्नो उत्पादन मा आफ्नो पैसा खर्च र पहिलो पटक ग्राहकहरु को लागी पर्याप्त सहज बनाउँछ। नतिजाको रूपमा, तिनीहरू फिर्ता आउन सक्छन् र तपाईंको वेबसाइटबाट खरीद गर्न सक्छन्। थप रूपमा, अक्सिजनको आकर्षक साइडबार सुविधाहरू, हेडर शैलीहरू, र व्यावहारिक डिजाइनहरू तपाईंको ग्राहक सन्तुष्टि बढाउन निश्चित छन् जुन बिक्रीमा अनुवाद हुनेछ। अन्तमा, अक्सिजनले उन्नत AJAX उपकरणहरू र HTML5 सुविधाहरू कुनै पनि अनलाइन स्टोरमा ताजा हावा सास लिन प्रयोग गर्दछ। आज नै प्रयास गर्नुहोस्!
कलरलिब भ्रमण र यस लेख पढ्न को लागी धन्यबाद! हामी यसको कदर गर्दछौं! मेनटenant, तपाईं कसरी सिक्न सक्नुहुन्छ वेबसाइट सिर्जना गर्न हाम्रो निःशुल्क WordPress
थिमहरूको प्रयोग गरेर।
खुलासा: यस पृष्ठले बाह्य सम्बद्धहरूका लिंकहरू समावेश गर्दछ जुन हामीलाई एक आयोग प्राप्त गर्न को लागी कारण यदि तपाईं उल्लेख गरिएको उत्पादन खरीद गर्न छनौट गर्नुहुन्छ। यस पृष्ठमा राय हाम्रो हो र हामी सकारात्मक समीक्षाका लागि अतिरिक्त बोनस प्राप्त गर्दैनौं।
४१ सर्वश्रेष्ठ Shopify एप्स तुरुन्त बिक्री बढाउन को लागी (२०२१)
2021-07-29 23:55:18 | वेबसाइट...
के तपाइँ BEST Shopify एप्स को लागी खोज्दै हुनुहुन्छ जुन तपाइँको स्टोर को बृद्धि र तपाइँको ब्यापार लाई अर्को स्तर मा लैजाने छ? अनुप्रयोगहरु बिक्री बढाउन को लागी यी अनुप्रयोगहरु लाई तपाइँ तपाइँको स्टोर लाई बढावा दिन, तपाइँको उत्पादनहरु लाई बेच्न, तपाइँको ग्राहकहरु लाई पुरस्कृत गर्न र सूची को प्रबंधन ग...
2021-07-27 19:14:57 | वेबसाइट...
Biteable ले तपाईंलाई स्टुडियो-क्वालिटी भिडियोहरू सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ जुन तपाईंको ब्रान्डमा ध्यान दिईन्छ। ख्याति दाबीको लागि पहुँच छ - यो प्रयोग गर्न सजिलो छ, र यसको उपकरण चयन 10 को पेशेवर टोलीहरूको लागि पर्याप्त बलियो छ, साथै एकल सिर्जनाकर्ताहरूले यसलाई प्रयोग गर्न र प्राप्त गर्न सक्दछन्। आश्चर...
2021-07-27 19:00:58 | वेबसाइट...
तपाइँको ई-कॉमर्स श्रोतालाई मुखको वचन मार्फत बढाउने लाभदायक तरिका पत्ता लगाउन सजिलो छैन (जुन वास्तवमा काम गर्दछ! ) भाग्यवस, यो सही समस्या हो जुन रेफरल क्यांडीले समाधान गर्न सेट गर्दछ। अन्य एसईओ उपकरणहरू भन्दा टाढा सेट यसले के हो भने त्यो हो टर्नकी उपकरण जसले तपाइँलाई एसईओ प्रक्रिया मार्फत डेभलपरको ज्...
H हबस्पट सीआरएम एकीकृत बिक्री बिक्री बढाउनको लागि
2021-07-26 23:45:07 | वेबसाइट...
के तपाई आफ्नो कार्यप्रवाह सुधार गर्न र तपाईको बिक्री बृद्धि गर्न हबस्पपको साथ ग्राहक सम्बन्ध प्रबन्धन (सीआरएम) अनुप्रयोगहरू एकीकृत गर्न चाहानुहुन्छ? हब्स्पप्टले लोकप्रिय मार्केटिंग, बिक्री र नेतृत्व उत्पादन उपकरणमा शक्तिशाली र सिमलेस एकीकरण प्रदान गर्दछ। यी एकीकरणहरूले अधिक सुविधाहरू र कार्यक्षमताका...
२ best उत्तम बुटस्ट्र्याप तालिकाहरू (डेटा व्यवस्थित) २०२१
2021-07-23 14:52:23 | वेबसाइट...
तपाईको वेबसाइट वा अनुप्रयोगका लागि हाम्रो उत्तम निःशुल्क र सावधानीपूर्वक डिजाइन बुटस्ट्र्याप टेबल टेम्प्लेटहरूको विशाल चयन। बजारमा सयौं निःशुल्क विकल्पहरू उपलब्ध भएपछि अनुसन्धान गरिसकेपछि हामीले आफ्नै टेबुलहरू बनाउने निर्णय गरेका छौं। हामीसँग वर्षौंको अनुभव छ। 'अनुभव र परीक्षण, हामी धेरै व्यावहारिक ...
२१ नि: शुल्क (धेरै लचिलो) बुकिंग फाराम टेम्प्लेटहरू २०२१
2021-07-23 14:44:54 | वेबसाइट...
हामी प्रोटोटाइपको लागि तेस्रो-पार्टी निःशुल्क बुकिंग फाराम टेम्प्लेटहरू प्रयोग गर्दै थियौं, तर त्यहाँ हामीले सँधै अतिरिक्त परिवर्तन गर्नुपर्‍यो। अन्त्य गर्न हामीले आफैले निःशुल्क स्निप्पेटहरू बनाउने निर्णय गर्यौं। तपाईं ती कुनै पनि एनमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंको वेबसाइटहरूमा आत्मविश्वासका साथ।...
२०२१ सबै niches र उद्देश्यहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो छिटो लोड गर्ने WordPress विषयवस्तुहरू
2021-07-23 14:32:24 | वेबसाइट...
जब प्रीमियम वर्डप्रेस विषयवस्तुहरू छनौट गर्दा, छिटो लोड हुने एउटा पाउनु महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले यदि पृष्ठ गति तपाइँको लागि महत्त्वपूर्ण छ भने, अरु कतै नजानुहोस्। तलको द्रुत लोडिंग WordPress विषयवस्तुहरू सबै कोठाका लागि र उद्देश्यका लागि तपाईंको आवश्यकताहरू पूरा गर्ने बढी सम्भावना हुन्छ। आधुनिक वेब प...
Beautiful 37 सुन्दर बहुउद्देशीय WordPress थीम २०२१
2021-07-23 14:25:01 | वेबसाइट...
के तपाइँ एक अद्भुत वेबसाइट सिर्जना गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ? यी सुन्दर वर्डप्रेस विषयवस्तुहरू त्यस्तै हुन् जुन तपाईंले आफूलाई अलग राख्नुपर्दछ। त्यहाँ धेरै तत्वहरू छन् जुन वेबसाइट सिर्जना गर्न जान्छन्: प्रशासक यूआई, यसको शक्ति, क्षमता, र प्रयोग सजिलो। 'प्रयोग गर्नुहोस्, र तपाईंसँग तपाईंको ग्राफिकल छ प्र...
२१ २०२१ html5 र बुटस्ट्र्याप सामाजिक बटन टेम्प्लेटहरू
2021-07-23 14:15:33 | वेबसाइट...
यी उत्कृष्ट (र सबै भन्दा राम्रो) सामाजिक बटन टेम्प्लेटहरू प्रयोग गरेर सामाजिक मिडियाको सम्भावना मुक्त गर्नुहोस् - हामी वेबमा उपलब्ध बटनहरू र आईकनहरूको समीक्षा गर्‍यौं, तर हामी यी २१ मा अडिग छौं। तपाई सजिलैसँग सही शैली फेला पार्न सक्नुहुनेछ किनकि यस संग्रहको विविधता। यो त्यहाँ रोकिदैन। यदि तपाईं चाहन...
२०२१ सबै भन्दा राम्रो पूर्ण चौडाई WordPress विषयवस्तु जुन धेरै टनको साथ आउँदछ
2021-07-23 14:02:04 | वेबसाइट...
आज, पूर्ण-चौंडाइको WordPress विषयवस्तुहरूको छनोट विशाल छ। प्रीमियम टेम्प्लेटहरू, उपकरणहरू, र विस्तारहरू तपाइँको आफ्नै पेशेवर हेर्ने वेबसाइट निर्माण गर्न सजिलो बनाउन सक्छ। अवश्य पनि, तयार गरिएको डिजाइनले तपाईंलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिदैन, तर यसमा अनन्त विकल्पहरू छन्। र एक समयमा जब तपाइँको बजेट त्यति उ...
२०२१ का लागि best० उत्तम एसईओ मैत्री वर्डप्रेस थिमहरू
2021-07-23 13:42:35 | वेबसाइट...
त्यहाँ% १% मौका छ जुन तपाईले गुगललाई खोज्दै "उत्तम एसईओ वर्डप्रेस विषयवस्तुहरू" खोजी गर्दै हुनुहुन्छ। र हामी त्यस कीवर्ड वाक्यांशको लागि SERPs को शीर्षमा छौं, हामी SEOको बारेमा कुरा गर्न बाध्य महसुस गर्छौं र कुन WordPress विषयवस्तुहरू गर्न सक्छन् गुगल र अन्य प्रमुख खोज इञ्जिनहरूमा पहिलो पृष्ठ रैंकिं...
कुनै पनि वेबसाइट २०१२ को लागि १ Multi नि: शुल्क बहुउद्देशीय वर्डप्रेस थीम्स
2021-07-23 13:26:53 | वेबसाइट...
यी एक शक्तिशाली नि: शुल्क बहुउद्देशीय WordPress विषयवस्तुको साथ एकै साथ धेरै फरक-फरक परियोजनाहरूमा काम गर्नुहोस्। हरेक चुनौतीलाई स्वागत छ, त्यसैले अब चार्ज लिनुहोस् र प्रभावकारी परिणामको आनन्द लिनुहोस्। २०० WordPress मा CMS शुरू भएदेखि WordPress धेरै व्यवसायीहरू र व्यवसाय मालिकहरूको मनपर्दो विकल्प भ...
तपाईंको वेबसाइटलाई बढावा दिन बाहिरी WordPress विषयवस्तुहरू अपडेट गरियो
2021-07-23 13:05:09 | वेबसाइट...
के तपाईं आफ्नो बाहिरी गतिविधि साइटमा त्यो सानो थोरै थप्न चाहानुहुन्छ? निम्न आउटडोर WordPress विषयवस्तुहरूको प्रयोग गरेर, तपाईं सफल आउटडोर ब्रान्ड र व्यवसायतर्फ पहिलो चरण लिनुहुन्छ। यदि तपाईंसँग पहिले नै एक वेबसाइट छ भने पनि, पुन: डिजाइनले कहिल्यै दुखाउँदैन। तपाईंको व्यवसाय विकसित हुँदै जान्छ र समयसँ...
२०२१ पुस्तकालयहरूको लागि १० उत्तम वर्डप्रेस थिमहरू
2021-07-23 12:55:16 | वेबसाइट...
पुस्तकालयहरूको लागि उत्तम वर्डप्रेस विषयवस्तुहरूको यस संग्रहको फाइदा लिनुहोस् र तपाईंको परियोजना विश्वासको साथ सुरु गर्नुहोस्। लाइब्रेरीहरू दिन प्रति दिन कम र कम लोकप्रिय हुँदै गइरहेका छन् सहजताका साथ जुन यो इन्टरनेटमा जानकारी खोज्नको लागि हो। यो वास्तविक स्टोरमा गएर भौतिक प्रतिलिपि प्राप्त गर्नुको ...
२०२१ को २ best उत्तम वर्डप्रेस परामर्श विषयवस्तु
2021-07-23 12:52:03 | वेबसाइट...
सबैभन्दा आधुनिक र व्यावसायिक परामर्श वर्डप्रेस विषयवस्तुहरूको एक विशाल सूची। तपाईंको व्यापारलाई आज बढावा दिन। आफै जादू गरीरहेको वा एक पेशेवरलाई भाँडामा उच्च शुल्क तिर्ने क्रममा, तपाईं सफ्ट थिमको साथ प्रक्रियाको गति बढाउन सक्नुहुनेछ। यसले तपाईलाई लामो समय लिन सक्दैन, तर अन्तिम उत्पादन तपाईले प्राप्त ...